I-SHOP4APPS, iMakethi yeNtengiso yeAndroid | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-SHOP4APPS, iMakethi ye-Android yentengiso yakwa-Motorola
IMotorola ilungiselela eyayo iMakethi ye-Android, eza kubizwa Ivenkile yeeapps. Isuka iqonga Imifanekiso yakhe yokuqala ifika kwaye nangona ibisemoyeni okwethutyana sele beyivalile, isekwinqanaba lovavanyo.
Ivenkile yeeapps ziya kufikeleleka zombini kwiselfowuni ngokusebenzisa usetyenziso olubiziweyo MotoAppstore okanye, kwaye le yinto entsha, evela kwisikhangeli esiqhelekileyo kwiPC. Nangona ifikeleleka kwiPC, usetyenziso luya kufuneka lukhutshelwe kwisiphelo sendlela kunye MotoAppstore.
Ezinye zeempawu zoku Imarike ye-Android yeVenkile Zizo:
Ukubakho kokuyisebenzisa kokubini kwifowuni ephathekayo nakwikhompyuter
MyLocker.- Lo msebenzi ukuvumela ukuba ube nembali yokukhuphela, ebandakanya umhla wokukhuphela, uguqulelo, igama lesicelo
Singazithenga usetyenziso kwisikhangeli sePC kwaye sizongeze kwicandelo MyLocker kwaye yakuba ifowuni ibaleke Ivenkile oku kuyakukhuphela usetyenziso olusetelwe kwi MyLocker.
Isaziso esizenzekelayo sohlaziyo lwezicelo ezikhutshelweyo Ivenkile yeeapps.
Ukwazi ukukhuphela kwakhona kunye nokudlulisela usetyenziso kwifowuni entsha.
Njengoko sibona ezinye zeempawu ezikhoyo ngoku Imakethi kaGoogle kaGoogle, Kodwa abanye baphucula ukusetyenziswa kwayo kakhulu, njengokusebenza MyLocker kunye nokukwazi ukufikelela kwiNtengiso ye-Android kwiPC.
Ngokwezinye izinto ezifunyenwe kwisiza kubonakala ngathi Ivenkile yeeapps Iya kufumaneka kumazwe aliqela kuphela, ubuncinci ekuqaleni, ezi zeMelika, iArgentina, iBrazil neMexico.
Emva kokwazi ezi ndaba ndishiyeke ndinamathandabuzo angasonjululwanga anje, Ngaba yile Ivenkile yeeapps kuxhomekeke kwi Imakethi kaGoogle kaGoogle Ngaba izicelo ezihlawulwayo ziya kuhlawulwa ngeGoogle Checkout okanye iya kwenza enye indlela? Ukuba le ntengiso intsha izimele ngokupheleleyo kwi Imakethi kaGoogle kaGoogle Kwaye isicelo sikwiimarike zombini, ngaba ungasithenga isicelo kwenye kwaye emva koko uyihlaziye kwenye?
Cofa kwimifanekiso ukuyandisa
Ndihlala ndikhetha ubukho bezinye izinto kuyo yonke into enxulumene nezorhwebo okoko ukhuphiswano luthanda ukuxhamla umthengi, kodwa ukuba oku kuvulwa kwevenkile kwenziwa ngokubanzi ngabanye abaqhubi, abavelisi kunye nabaphetheyo, ndibona izicelo ezi-5 okanye ezi-6 ezifakwe kuphela kwiimarike kunye nokukhangela omnye emva komnye ude ufumane isicelo esifunwayo. Ngokwenxalenye ndibona izinto ezintle nezimbi kuyo, siya kulinda ukuba sisebenze ukuze sikwazi ukunika uluvo oluchanekileyo.
Ucinga ntoni, uyakuthanda ukuphindaphindwa kweemarike zesicelo?
Silandele Twitter nge @Androidsis
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » I-SHOP4APPS, iMakethi ye-Android yentengiso yakwa-Motorola
Mohand jmamaa sitsho
Phendula u-Mohand Jmamaa